China Mask Machine - Vanopa uye Vagadziri - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Mask Machine
Kumeso mask kumeso imhando yemasiki ine mamwe kusefa mashandiro akagadzirwa neakagadziriswa-akawanda machira asina kuvezwa machira kuburikidza nekupisa kupisa, kuputira kuumba, ultrasonic welding, kubvarura kubviswa, kushambadzira kwema earband mhino bhandi mitsetse, nezvimwe.
Iyo mask mask yemuchina haisi yemashini imwechete. Zvinoda kushandira pamwe kwemakawanda michina kupedzisa nzira dzakasiyana dzakasiyana.
Izvo zvinonyanya kuzivikanwa mask zvigadzirwa mumusika zvinosanganisira: mukombe masiki muchina, isina-kurukwa flat mask mushini, N95 masiki muchina, 3M9001 / 9002 kupeta masiki muchina, duckbill mask muchina, matatu-matatu guruva masiki muchina uye zvichingodaro.
Izvi zvinotevera ndezve Automatic Mask Machine (imwe yeaviri) ine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Automatic Mask Machine (imwe yeaviri).
Kadhi Plane Mask Machine
Kadhi ndege maski muchina unobatanidza yemasiki maski muchina uye shunt muchina, uye inobatana neese chero maviri maviri tambo tambo inoyerera machira kuburikidza nemuchina we shunt kuumba yakazara otomatiki yemashure maviri maviri
Mask yekugadzira mutsara
HTL-120 flat mashi imwe dhiza maviri kumeso maski ndeye yakazara otomatiki yakakwirira-yakamhanyisa flat bhendi yekugadzira mutsara wekugadzira ichangobva kugadzirwa neJiangsu Haitel Machina Co, Ltd, Ultrasonic fusion, kuumba, kucheka uye imwe yakazara-process automation, pedza iyo maitiro ekugadzira ese kubva pazvinhu zvakasviba zvekochi kusvika kumaskhi yapedzwa.
Semi otomatiki Masiki Machine
Izvi zvinotevera ndezveSemi Automatic Mask Machine ine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise Semi Automatic Mask Machine.
Izvi zvinotevera ndezveN95 Mask Machine ine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani N95 Mask Machine.
Izvi zvinotevera ndezve Automatic Cup Mask Mashini ane hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Jekesheni reMasiki Machine.
Wholesale Mask Machine yakagadzirwa neChina kubva kufekitari yedu. Fekitari yedu inonzi Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd inova imwe yevagadziri uye vatengesi vanobva kuChina. Kugamuchirwa kutenga Mask Machine nemutengo wakaringana uyo une CE, FDA. Iwe unoda here mutengo wemutengo uye makotesheni? Kana iwe uchida, isu tinokwanisawo kukupa.